Umxholo nguKumkani ... Kodwa Mnye kuphela onxiba isithsaba | Martech Zone
Umxholo nguKumkani… Kodwa Mnye kuphela onxiba isithsaba
NgoLwesibini, Matshi 7, 2017 NgoLwesithathu, Matshi 8, 2017 Douglas Karr
Uvile intetho kuyo yonke indawo, Umxholo nguKumkani. Andikholwa ukuba itshintshiwe, kwaye andikholwa ukuba iyakuze yenzeke. Nokuba ziinkampani ezibhala malunga neemveliso kunye neenkonzo, bafumana amajelo eendaba bebhala ngazo, amajelo eendaba ekwabelwana ngawo abelana ngawo, amajelo eendaba ahlawulwayo ayabakhuthaza… ngumxholo oqhuba ifuthe, igunya kunye nezigqibo zokuthenga.
Ingxaki iza xa wonke umntu ephantsi kwenkolelo yokuba zabo Umxholo uyinkosi. Masithembeke, uninzi lomxholo luyoyikeka. Ihlala ilayini-yemveliso, umxholo osoloko uluhlaza ongenabalinganiswa, ibali, okanye nantoni na ezahlula-hlulayo. Okanye kuyathethwa-thetha-thetha, into eqhelekileyo kumxholo obhalwe phantsi ngamacandelo e-bureaucracy kunye nolawulo oluncinci.
Akukho, ewe, ayifanelekanga isithsaba. Umxholo wakho awunakuba yinkosi ngaphandle kokuba yahlukile, iyamangalisa, kwaye iphumelele edabini. Ngaba ufuna ukuba nguKumkani? (Okanye uKumkanikazi-umxholo awunasini). Nazi ezinye iingcebiso:
Nxiba indawo -Ukumkani akanxibi mpahla zomntu oqhelekileyo, isinxibo sakhe sihonjiswe ngokungaqhelekanga ngamatye axabisekileyo, izinyithi ezixabisekileyo kunye nelinen entle. Umxholo wakho ujongeka njani?
Yiya kwinkundla yakho -UKumkani akathethi. Akahlebi amazwi akhe, uwafuthela phezulu kwilizwi lakhe. Uqinisekile kwaye uzimele. Ngaba umxholo wakho?
Tshabalalisa iintshaba zakho -Ukuba ufuna ukuba nguKumkani, kuya kufuneka ulawule ubukumkani bakho. Ngaba uthelekise umxholo wakho nabakhuphisana nabo? Ayinakufutshane; Kuya kufuneka ibabethe ngophando, imithombo yeendaba, ilizwi kunye nefuthe. Musa ukuthatha amabanjwa.
Sebenzisa ii-knights zakho - Akwanelanga ukuhlala uzolile ebukumkanini bakho. Umxholo wakho kufuneka uqhutyelwe esiphelweni somhlaba ngabo bafunge ukuthembeka kwabo. Abameli babasebenzi, abachaphazeli, kunye nabaphulaphuli bakho kufuneka baphathe umyalezo wakho baya ebantwini.
Nika izipho ezintle - Izikumkani ezingabamelwane ziingqekembe ezimbalwa zegolide. Musa ukoyika ukuphanga ubukhosi kwizikumkani ezingabamelwane ngezipho ezinkulu. Ngamanye amagama, uKing Zuck ungumnini wabaphulaphuli-mhlawule!
Hayi kulungile ukuba nguKumkani. Kodwa uyi-guillotine kuphela ekuphulukaneni nentloko yakho. Zilungiselele ukukhusela umhlaba wakho kwaye ulawule uloyiko kwiintshaba zakho.
tags: IgunyaUmxholo ngukumkaniUkuThengiswa kweMpahlaisithsabaihlala iluhlazainkosi
I-Pollfish: Ungaluhambisa njani uPhando lweHlabathi lwe-Intanethi ngokufanelekileyo ngeSelfowuni
Yintoni idatha enkulu? Zithini izibonelelo zeDatha eNkulu?